Kitra afrikanina: samy miandrandra fandresena ny Cnaps sy ny Elgeco | NewsMada
Hatao, amin’ity alarobia ity, ireo lalao savaranonando miverina, eo amin’ny fifaninanana afrikanina taranja baolina kitra, handraisan’ny Cnaps Sport sy ny Elgeco Plus anjara. Samy hiatrika izany any an-tanin’olona avokoa ireto ekipa solontena malagasy ireto. Samy miandrandra fandresena avokoa ireto ekipa roa tonta ireto.
Any Harare, Renivohitr’i Zimbaboe, no hidona amin’ny FC Platinum ny Cnaps Sport eo amin’ny fiadiana ny ho tompondaka “Ligue des champions”. Tsy maintsy hiady mafy ny Cnaps, amin’ity, satria nisaraka ady sahala 1 sy 1 ny roa tonta, nandritra ny fihaonana mandroso, tetsy amin’ny kianja Vontovorona. Mila mamono baolina voalohany izany ny Cnaps Sport hahazoana milamina ary manampy iray eo amin’ny fizaram-potoana faharoa. Ady sahala 2 no ho 2 na fandresena no tsy maintsy tadiavin’ny Cnaps Sport vao afaka manohy ny diany any amin’ny fihodinana manaraka. Tsy azon’ny ekipa malagasy atao ny manao 0 sy 0.
Efa manana tombony kosa ny Elgeco Plus, hanafika ny Deportivo Unidad avy atsy Ginea Ekoatorialy satria efa nandresy 3 no ho 1 teo amin’ny lalao mandroso, tetsy Mahamasina, ny alahady 2 desambra lasa teo. Nambaran’i Auguste Raux, mpanazatra, teo am-piaingana, fa tsy azo atao ny miaro tena na manana tombon’isa aza satria milalao an-tanin’olona fa tsy maintsy mitady baolina maty. Ady sahala fotsiny dia efa ampy hiakaran’ny Elgeco Plus amin’ny dingana manaraka.